Adder Technology's ADDERLink Ọhụrụ ™ INFINITY 3000 Na-enye Ndị Mgbasa Ozi Oge Ọsọ | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Adder Technology's ADDERLink ọhụrụ nke F INFINITY 3000 na-enye ndi Mgbasa Ozi Ogbe
Ọdịnaya dị ukwuu bụ ụgwọ ọrụ kachasị mma onye ọkachamara mgbasa ozi nwere ike inye ndị na-ege ha ntị. Mana nrụpụta ọ bụla chọrọ teknụzụ ziri ezi maka iji nwee ngosi. Ọ bụrụ na onye okike nwere ike ịchọta njikọ ziri ezi iji mee ka ọdịnaya ha pụta, ọ ga-eme ka nzuta ha ha bakwuo uru. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji nwee ndị isi Njikọ ọnụ dịka Technology Adder onye n’enye osiso ihe mmekorita ya na oru di elu, nke n’enweghi obi abua bu ihe ngosiputa nke ohuru ohuru ha, nke bu USB 2.0 IP KVM extender, the ADDERLink ™ INFINITY 3000.
Banyere Technology Adder
Kemgbe afọ 1984, Technology Adder etolitewo ghọrọ onye ndu zuru ụwa ọnụ na ngwọta njikọta yana IP KVM arụmọrụ dị elu. Adder's Nleta nke teknụzụ agbasala na mmepe na nrụpụta nke ngwaahịa na - eduga n'ahịa nke na - ewetara ndị ahịa ma echiche nke njikwa na udo nke uche site na njikwa nke ngwa-dị oke mkpa, gafee ọtụtụ ọrụ.
Technology Adder na-arụ ọrụ dị ka ụgwọ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ ma na-akpali akpali iji bụrụ akụkụ nke ma na-enwe onwe ya na inye gburugburu na-atọ ụtọ na okike maka uto na ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu. Adder's ụdị mgbanwe, ịgbatị, na ngwọta IP na-eme ka njikwa ntụkwasị obi nke sistemụ mpaghara, nke dịpụrụ adịpụ, na nke zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ dịka mgbasa ozi, iwu na njikwa, ụgbọ njem, ụlọ akụ, ọgwụ, na gọọmentị etiti. A ma ụlọ ọrụ ama maka ọrụ ha dị elu, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, na nrụpụta siri ike, na ngwaahịa ndị ọrụ ya na-esonye site na onyinye ọrụ ọkachamara zuru oke, nke na-enyere ndị ahịa aka n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche ịgbatị, ịgbanwee, matriks ma na-ejikwa gburugburu anya. ma mpaghara gị ma ọ bụ site na IP. Technology Adder na-enyere aka idozi njikọta IT na nsogbu ịma aka dịpụrụ adịpụ maka ngwa-dị oke mkpa na gburugburu ya, yana ihe ọhụrụ ADDERLink ™ INFINITY 3000, ọ ga - aga n'ihu na-emezu ụdị ihe a.
N'afọ mbụ a, na ADDERLink ™ INFINITY 3000, ma ọ bụ ALIF3000, ewepụtara. Na ALIF3000 na-anapụta ezigbo oge na igwe anụ ahụ na mebere akụrụngwa site na otu igwe mmadụ na-enyocha ya (HMI). Usoro usoro a nwere oge zuru oke iji kwado maka agbasa ozi n'egwuregwu egwuregwu na ndị ọkachamara n'ọdịmma dịka ha na-elele irite uru na mgbanwe na ohere uto nke ngwa bara ụba nyere. Nke a na-enyere ha aka ịbanye na igwe igwe nkịtị na desktọpụ ọgbara ọhụrụ na-enweghị nsogbu. Na mgbakwunye na ADDERLink ™ INFINITY 3000, Technology Adder nwere otutu ihe nrite nke otutu IP IP KVM, ihe ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series, na ADDERLink na-akpọ oku +. Ndị a na-enyere ndị ọkachamara mgbasa ozi na mgbasa ozi ohere ịnweta ma dezie HD vidiyo si n’ebe ọ bụla n’ụwa dị ka à ga-asị na a na-ejikọ ha na mpaghara.
The ALIF3000's imewe na-enye ya ohere ijikota ohere VM n’ime network ADDERLink INFINITY dị adị na-enweghị nsogbu n ’mbibi, downtime, ma ọ bụ ụgwọ nnọchi ọnụ na-enweghị atụ. E wukwasịrị ya nke ọma IntelAr Nlekọta ụlọ microprocessor X-86, nke na-enye ya ohere ịnapụta ogo foto zuru oke, ọdịyo na USB 2.0 gaa otu ma ọ bụ ihu abụọ n’elu otu njikọ 1GbE.
Site na ijikota ihe ALIF3000 na Njikwa INFINITY ADDERLink (AIM), ndị nchịkwa nwere ike ịkọwapụta ikike ịnweta onye ọrụ echedoro nke ọma iji hụ na enwere ike ịnweta PC zube nke ndị ọrụ nyere ikike - na-enye ndị ahịa azụmahịa udo nke uche na mmesi obi ike.
Atụmatụ ndị ọzọ nke ALIF3000 -agụnye:
Ọpụ. Anya: Unlimited over IP / 100m over CATx or fiber
Mkpebi: Ruo 2560 ×[Email na-echebe]
Ọnụ ọgụgụ nke nyocha: Ruo 2
Maka ozi ọzọ banyere ALIF3000, nleta www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-3000.
Gịnị mere Technology Adder Ọ Dị Nnukwu Maka Ndị Mgbasa Ozi
Adder's ihe omume afọ atọ na ọkara enyerela ya aka iso ụfọdụ n'ime ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa na -emepụta n'ichepụta na n'ichepụta KVM ịgbanwee, ịgbatị na usoro matriks iji kwado ọrụ mgbasa ozi zuru ezu. Usoro ọrụ a na-esite na okike na imepụta ihe ruo na ime ụlọ mgbasa ozi na gburugburu ebe obibi. Adder Technology's mmụọ ịchụ nta ego agbakwunyere ọdịbendị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ siri ike, na-akpali, na-eme ememe ma na-emeziwanye ihe ọhụụ na nkà na ụzụ nke na-aga n'ihu na-ebute ụzọ. Technology Adder zuru oke maka ndị na-agbasa ozi mgbasa ozi na-achọ ịnwe ụzọ edozi njikọta nke ọma na IP KVM arụmọrụ dị elu.
Maka ozi ọzọ banyere Technology Adder nleta www.adder.com/en.
Technology Adder ADDERLink ipeps + ADDERLink ™ INFINITY 3000ADDERLink ™ INFINITY 3000 ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series ALIF3000 Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ngwọta njikọta na arụmọrụ dị elu IP KVM content Graham Chapman Prmoted toEditor Litra Matthews otu igwe mmadu na-eme SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ TVU Networks Ngosi Injinia 2020-05-14
Previous: Penny Arcade na - eji Blackmagic Design ATEM Mini Switcher maka Live Streaming Workflow
Osote: DPA Microphones 'MMA-A Digital Audio Interface Na-egosi Nnukwu Mkpa Maka Mmepụta-Site-na-ụlọ